नबिल ब्यालेन्सड फन्ड–१ को मुल्य कति ? « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
नबिल ब्यालेन्सड फन्ड–१ को मुल्य कति ?
१२ श्रावण २०७४, बिहीबार ०९:०८
काठमाडाै १२ साउन । नबिल ब्यालेन्सड फन्ड–१ को खुद सम्पत्तिको मूल्य गत महिनाको अवधिभन्दा शून्य दशमलव १२ प्रतिइकाईले घटेर २३ दशमलव ९५ प्रतिइकाई रहेको छ । अघिल्लो महिनामा २४ दशमलव शून्य ७ प्रतिइकाई रहेको थियो ।
नबिल ब्यालेन्सड फन्ड–१ ले ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ शेयर लगानी गरेको छ । अघिल्लो महिनामा ९५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ गरेको थियो । यसको आम्दानी ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा रहेको छ । अघिल्लो महिनामा ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ कमाएकोे थियो । खर्च ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो महिनामा ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
यसैबीच सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानीमध्येमा हाइड्रोपावरमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको ६५ हजार ६० कित्ता, डेभलपमेन्ट बैंकमा सबैभन्दा बढी गरिमा विकास बैंकको ६१ हजार २ सय ७५ कित्ता, वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा बढी माछापच्छे« बैंक लिमिटेडको ४८ हजार ३ सय ९८ कित्ता र इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा बढी एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३३ हजार ७ सय ७९ कित्ता शेयरहरु रहेका छन् ।
प्रकाशित : १२ श्रावण २०७४, बिहीबार ०९:०८
एभरेष्ट बैंकको ऋणपत्रमा आजदेखि आवेदन दिन सकिने, ब्याज कति दिन्छ ?